Indlela ukuxazulula izinkinga geometry? Abafundi abaningi babuza lo mbuzo iminyaka eminingi. Ngezinye izikhathi ngisho into ngokwawo ubangela yokwesaba nokunyanyisa ngenxa ngokungaqondi ngezihloko ngabanye. Khona-ke kunzima kakhulu ukuba akwazi ukunqoba izingqinamba ukungathandi we-geometry futhi aphinde ngesithakazelo ukuya emakilasini.
Ngezindlela eziningi, konke kuncike kanjani Thishela uchaza lokho ayekufundisa. Uma uthisha akwazi ukuvusa isithakazelo abafundi, eminye kuzoqhubeka isithupha, futhi isifundo ngasinye kuyoba okujabulisayo. Izingane iyohlala ngisho phezu break ukubamba ngangokunokwenzeka ukuxazulula izinkinga.
Uma ugula noma lungisa ngale ndaba kukhona ezinye zezizathu ezakwenza abakutholanga ukuqonda isihloko, lesi sihloko sizokusiza uqonde.
Kanjani ukuze ufunde ukuze uxazulule izinkinga geometry?
Okokuqala udinga ukuqonda ukuthi ngelinye ilanga wena neze bayoqhubeka kakhulu elwazini lwabo, ngakho Tune kuya inqubo yokufunda eside.
Udinga ukuchaza inhloso. Uma udinga nje ukuxazulula inkinga geometry, hhayi amamaki embi imibuzo, wena nje ifunde isifundo esithile futhi waqeqeshwa ezicini zokuphila.
Thatha incwadi bese upheqela ngokusebenzisa zokugcina tigaba letimbalwa, ozifundile. Zama ukuthola ulwazi, ukuqonda ukuthi kuthinta kanjani ulwazi lwakho bazohlolwa. Manje ungathatha ephepheni bese ibheka nezinkinga eziningana, qiniseka ukubheka embhalweni ebhukwinitifundvo bese uzama ukuqonda izixazululo algorithm.
Uma into akusebenzi, ubheke Reshebnik: okuyinto ngokukhethekile okukhiqizwayo emabhukwinitifundvo. Vele ungabhali off konke, zama ukuthola indlela yokuxazulula izinkinga geometry.
Khumbula ukuthi lo thisha wathi ekilasini, mhlawumbe abanye lwazi kuyoba usizo.
Bunake isici womuntu. ulwazi Good balezi zingane isihloko noma abafundi ngeke akunike ukusiza. Ezinye zazo zingachazwa umsebenzisi okuningi othisha enobungane.
Futhi kulabo banquma ukungayisebenzisi nhlobo nje ukuqonda izihloko ngazinye, futhi ufunde ukuze uxazulule izinkinga futhi kanjani nuts bechofoza, kudingeka usebenzele ukuba uhambe kahle.
Okokuqala, into esemqoka - kuyinto uzikhuthaze ukuba uqhubeka ubonisa. Kuqondane ukuthi umbuzo kanjani ukufunda ukuze uxazulule izinkinga geometry, kuphakama kanye kuphela, bese nje thoma ukukopa izibonelo kusuka ku-intanethi. Ngakho ukwenza engathandeki kakhulu.
Thuthukisa nokubekezela. Buka reshebnik lula kakhulu, yebo, kodwa cabanga yeka ubumnandi uyozibonela lapho unquma iphazili eziyinkimbinkimbi ngokwakho. Ngakho-ke kungcono ukuhlala icele i extra yehora okokufundisa, kunokuzama ukubhala off ngokushesha isinqumo kothile.
Mhlawumbe izibalo zama-engela okudingayo ukuze ube umsebenzi esikhathini esizayo. Kuyisizathu esengeziwe akufanele bayihlehlise unomphela, udinga ukuthatha inkinga manje.
Okwesibili, umkhuba, futhi wona wodwa, kuyokusiza ukuba ube isinyathelo esisodwa eduze umgomo wakho!
Zijwayeze yokufunda into entsha nsuku zonke. Vele azame ukuxazulula inkinga eyodwa ekuseni, bese uhlole okhiye ngokunemba yayo. Kamuva uqaphela ukuthi nsuku zonke le nqubo ngokushesha futhi kangcono.
Into ebaluleke kakhulu lapha - ungadikibali futhi musa unake izinkinga ezincane. Uma uvula ngokulandelana kosuku lesi seluleko, indaba indlela yokuxazulula izinkinga geometry, uzonyamalala ngokwalo.
Okwesithathu, cela usizo kubangane.
Ungesabi esikoleni waphinda baphakamisa izandla ngokulandelana, ukuza ebhodini ukuxazulula Ngokwesibonelo eziyinkimbinkimbi, okungekho muntu owayeke alokothe okukhulelwa. Ngisho uma kwenkinga futhi awukwazi ukwenza lo msebenzi, lutho olungalungile kulokho. Thishela sizochaza isibonelo isinqumo ngisho ngezahlulelo isibindi sakho. Libuye libe indlela enhle ukukhombisa nabo ulwazi.
Izingane lingakusiza ukuqaliswa imisebenzi yazo lapho sezazi ukuthi niyithatha ngokungathí sina ekuhloleni isihloko.
Musa hang up ekhaleni lakhe!
Ungadumali uma akekho waphendula isicelo sakho. Ungahlala bafune usizo komfundisi ngubani sizochaza ukuthi awakhe kanjani ukuxazulula inkinga geometry. Ngisho ne izimali elinganiselwe kuzoba izifundo isivuno esihle nge-Skype, okuyinto akukho okubi kakhulu ukwedlula izifundo lotawentiwa umhlangano siqu.
Yiyo yonke iseluleko. Ake banethemba namanje baqonde indlela yokuxazulula izinkinga geometry. Kunoma ikuphi, zama ukusebenzisa lezi zindlela practice, futhi uzoqaphela izinhlelo zethu!
Indzaba ngomama: ukubhala, amathiphu, izibonelo
Ukulungiswa futhi zokuThuthukiswa Isizukulwane amakhono yekuchumana zasenkulisa izingane
Lisho ukuthini inkulumo ethi "isikulufa up impumulo yakho?" Okusho phraseologism "impumulo up"
Imizimba ezincane ngaphakathi cytoplasm cell. Igama, uhlobo uya khona
Columbia Izicathulo ( "Columbia") amateki abantu asebenzayo
Izimiso komthetho wezabasebenzi kanye endaweni yabo uhlaka kwelungelo